लुम्बिनीमा कोभिडको कहर : अस्पतालमा छटपटिँदै बिरामी, अक्सिजन खोज्दै आफन्त- फिचर - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीमा कोभिडको कहर : अस्पतालमा छटपटिँदै बिरामी, अक्सिजन खोज्दै आफन्त
वैशाख २५, २०७८ अमृता अनमोल
बुटवल — उनी बोल्न सक्दिनथिन् । शरीर लत्रेको थियो । ज्वरोले अचेत थिइन् । सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो । ७९ वर्षे कुमारी थापाको शरीरमा अक्सिजन लेवल घटेर ५५ देखि ६० थियो । स्वास्थयकर्मीहरुले एक घण्टाभित्र अक्सिजन दिन नपाए बचाउन नसकिने बताएका थिए ।
तर, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी उनले अक्सिजन पाइनन् । चिकित्सकले आफैं जोहो गरेमात्रै लगाइदिने बताए ।
छोरा कृष्णबहादुर बिहानभर बुटवल बजार चहारे । मध्यान्ह बुटवलको प्रदर्शनी गेट अगाडि भाजुरत्न ग्यास सप्लायर्सबाट २९ हजार रुपैयाँमा सिलिन्डर खरिदे । त्यही सिलिण्डर अस्पतालमा ल्याएर आमालाई लगाइदिए । अस्पतालको बरन्डामा ह्वीलचियरमा राखिएकी वृद्धाले धीमा गतिमा अक्सिजन लिन थालिन् । देवदह ३ सिमरहनाका कृष्णबहादुरले भने ‘बिहानभर कम्ती सास्ती भएन । धन्न अक्सिजन पाएँ । अब आमालाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने आश छ ।’
शनिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बरन्डामा आफै जोहो गरेको अक्सिजन लिँदै देवदहकी श्रीकुमारी थापा ह्वीलचियरमा ।
थापालाई ४ दिनदेखि शरीर दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने भएको थियो । एन्टीजेन परिक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखियो । बोल्नै नसक्ने भएपछि छोराहरुले शनिबार बिहान लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएका थिए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ । अभाव भएपछि सिकिस्त विरामीले पनि अक्सिजन पाएका छैनन् । विकल्प के त ? विरामीका आफन्तहरु हारगुहार गर्दै अक्सिजन जुटाउँदै अस्पताल लैजादै गर्न लागेका छन् । ‘अस्पतालले अक्सिजन दिन सक्दिनँ भनेपछि हामी आफैं अक्सिजन खोज्न बुटवलका उद्योग र सप्लायर्सहरु चाहार्यौं,’ बुटवल १० कालिकानगरका विकास पुनले भने, ‘धन्न दिउसो खाली अक्सिजन भेटियो । भरेर आमालाई लगाएका छौं ।’ कोरोना संक्रमित उनकी आमा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आफैंले किनेको अक्सिजन लगाइराखेकी थिइन् । अक्सिजन लेवल ६० बाट बढेर ८० मा पुगेको थियो ।
शनिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गेटमा अटोरिक्सामा भर्नाको पालो कुर्द बुटवल ११ देवीनगरका लक्ष्मण पासी ।
यसअघि होम आइसोलेसनमा बसेकी राममाया शुक्रबार रातिदेखि शिथिल बनिन् । खोकी बढ्यो । ज्वरो आयो । ४७ वर्षीयालाई सास फेर्नै समस्या भयो । आफन्तले शनिबार बिहान ४ बजे लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएका थिए । अस्पतालको भुईंमा ठाउँ त पाइन् । उपचार सेवा पाइनन् । अक्सिजन बिना सास लिन नसक्ने अवस्थाकी उनलाई अस्पतालले आफैं अक्सिजन खोज्न आग्रह गर्‍यो । छोरा विकासले मध्यान्हमा जसोतसो खाली सिलिन्डर पाए । भाजुरत्न ग्यास सप्लायर्समा ७ सय रुपैयाँ तिरेर अक्सिजन भरेको उनले बताए ।
शनिबार दिउसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्ष र फिबर क्लिनीकमा गरी ९१ विरामी थिए । त्यसमध्येका १४ विरामीले आफैं अक्सिजन खोजेका थिए । चिकित्सकका अनुसार सबै विरामी अक्सिजन लगाउनु पर्ने अवस्थाका थिए । तर, अस्पतालले ३५ विरामीलाई मात्रै अक्सिजन दिएको थियो । कोरोना फोकलपर्सन डा. नन्दु पाठकले अक्सिजन अभाव भएकाले सबै विरामीलाई अक्सिजन दिन नसकेको बताए ।
भर्ना कुर्दै, अस्पतालकै आँगनमा छटपटिँदै बिरामी
शनिबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा गाडीमा पालो कुर्दै तिलोत्तमा ४ डिंगरनगरका दलबहादुर खराल ।
शनिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा अस्पतालको ढोकासम्म संक्रमित बिरामीले भरिएको थियो । कोही भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजन जुटाउन हारगुहार गर्दैथिए । कोही भर्नाका लागि बिन्ति बिसाउँदै थिए । अस्पतालको भुई र बरन्डासमेत संक्रमितले भरिएपछि अस्पतालले विरामी भर्ना लिन छोडेको थियो ।
बुटवल ११ देवीनगरका लक्ष्मण पासी अस्पतालको गेटमा अटोरिक्सामा पल्टिएका थिए । आफन्तले खोजिदिएको अक्सिजन सकिनसकी लिँदै थिए । अस्पतालभित्र छिर्न पाए बाँच्ने आशमा बेलाबेलामा आँखा खोल्थे । निराश हुँदै आफैं आँखा बन्द गर्थे । छोरा बद्री भर्नाका लागि चिकित्सकसँग बिन्ती गर्दै थिए । पत्नी र बहिनी बिरामीलाई सम्हाल्दै थिए । ‘खोई भर्ना पाइएलाजस्तो छैन,’ छोरा बद्रीले भने, ‘आफैभित्र पसेर पनि हेरें भूइ पनि खाली देखिनँ । बचाउने आशा हराउँदैछ ।’
शनिबार अस्पतालका खाली सिलिण्डर भर्न पठाइदै । सबै तस्बिर : अमृता अनमोल /कान्तिपुर
बद्रीले बिहान ५ बजे रिक्सा चलाउँदै बाबुलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएका थिए । अस्पतालले अक्सिजनमा राख्नुपर्ने बताउँदै भैरहवा लैजान सुझाव दिएको थियो । रिक्सा गुडाउँदै उनले भैरहवाको भीम अस्पताल र मेडिकल कलेज चहारे । कतै ठाउँ पाएनन् । त्यसपछि फर्काएर दिउसो १ बजे फेरि अस्पतालमै ल्याएका थिए । गेटभित्र भएकाले स्वास्थयकर्मीले अक्सिजन लिने र ज्वरो नाप्ने काम गरेका थिए । ‘बुबा आत्तिइरहनु भएको छ । लौन उपचार गर बचाउ भन्नुहुन्छ,’ बद्रीले भने, ‘हामी विवश छौं । टुलुटुलु हेरेर एकछिन पर्खनुस् भनेर टारेका छौं ।’
तिलोत्तमा ४ डिंगरनगरका ६९ वर्षे दलबहादुर खराल गाडीभित्रै अस्पतालमा भर्ना हुन पालो कुर्दै थिए । १४ दिनअघि कोरोना देखिएका उनी ओम शान्तिको आइसोलेसनमा थिए । छोरा विमलका अनुसार शुक्रबार च्यापेपछि तिलोत्तमाको अस्थाइ कोरोना अस्पतालमा लगियो । अस्थायी अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने बतायो । बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स पनि पाएनन् । नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे चढ्ने गाडीमाअक्सिजन सिलिण्डर जोडेर दिउँसो बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिकमा ल्याइएको थियो । छोरा विमलले भने, ‘डाक्टरले अक्सिजनसहितको आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ भन्छन् । तर, हामीले अस्पतालको भुईं पनि पाएनौं ।’
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ २१:१४
पाल्पामा कोरोनाबाट थप दुईको मृत्यु
वैशाख २५, २०७८ माधव अर्याल
पाल्पा — कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पाल्पामा शनिबार थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२, सामोदी सर्देवाका ५२ वर्षीय पुरुष र तानसेन नगरपालिका–७, का ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले जानकारी दिए ।
सोमादी सर्देवाका पुरुष सिजी सिमेन्ट कम्पनी नजिकै होटल व्यवसाय गर्दै आएको र अर्का व्यवसायीलाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज आएका थिए । उनको शव परिवारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर रिडी घाटमा अन्त्येष्टि गरेका छन् ।
तानसेन–७, का पुरुष तानसेन–६, क्याम्पस रोडमा होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए । शुक्रबार श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास लगेका थिए ।
यसैबीच, पाल्पामा शनिबार थप १ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १ सय १२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ६८ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ २०:५८